Iziphathimandla Zibona Ukugcotshwa Kwe-Utica Harbour njengoMilestone - I-Ellicott Dredges
Kwangathi 3, 2013
Source: Ukususwa Namuhla Ngu-DAN MinER
UTICA, NY (WKTV) - Eminyakeni emibili, uzoqala ukubona izindawo zokudlela, izitolo zokuthengisa futhi mhlawumbe nehhotela lizovela e-Utica Harbour.
Ukwehliswa kwechweba kuqale ngoSepthemba kanti bekumele kuqhubeke unyaka omusha. Kodwa-ke, iDolobha lase-Utica nezikhulu zikahulumeni zithole isipho sikaKhisimusi sokuqala ngoLwesine.
"Bakwenza ngesikhathi sokurekhoda, bakithi," kusho uCarmella Mantello, uMqondisi weCanal Corporation. “Besilinganisele cishe izinyanga ezine ukuzincisha. Bakwenze kungakapheli izinyanga ezimbili. ”
"Akuzange kuthathe inkontileka yangasese," kusho owe-Assemblywoman uRoAnn Destito. "Sisebenzise abasebenzi bethu bakahulumeni ukuthi basebenze futhi bakhombisile ukuthi abagcini ngokuba nobungcweti kuphela, banobuchwepheshe bokwenza lo msebenzi - hhayi ngesikhathi sokurekhoda kuphela, kodwa nangesikhathi esisezingeni."
Isikebhe sase-Utica, eceleni kweNorth Genesee Street, asisetshenziswanga eminyakeni ye-30. Abaningi kini mhlawumbe bakhumbula izimeya zase-Utica ezidlule zikhuluma ngamakhono etheku elinalo.
"Eminyakeni embalwa ezayo, sizobona lesi siza sidluliselwe eDolobheni lase-Utica futhi esethemba ukuthi ukusetshenziswa kakhulu kulo mhlaba," kusho uMantello. “Siyethemba ukubona umzila womhlaba, indawo ehamba phambili, mhlawumbe imarina. Ezinye izindawo zokuthuthukisa ukusetshenziswa, ezentengiselwano, ezokungcebeleka zomphakathi nezindawo zokufinyelela emphakathini lapha e-Utica Harbour. ”
Amayadhi ama-cubic e-83,000 abikwa phansi, futhi ukukhiya kwavulwa kabusha. IMeya uRoefaro ibiza leli phuzu njengengqophamlando.
"Lokhu kuzovuselela i-Utica," kusho iMeya uRoefaro. “Lokhu kuzosenza idolobha lokuvuselela esazi ukuthi singaba kulo, futhi lokhu kuzosibuyisela ebalazweni. Sizobe siyindawo, hhayi kuphela e-Oneida County, kodwa enyakatho neNew York. ”
Indawo yokukhiqiza amandla eyake yema endaweni, ngakho-ke iGridi kaZwelonke ibamba iqhaza elikhulu enqubweni yokuhlanza. Izindleko zayo zazingaphezulu kwama- $ 100,000,000.
Ishicilelwe kabusha kusuka ku-WKTV
Izikebhe manje sezizokwazi ukuhamba ngomkhumbi e-Utica Harbour ngaphandle kokwesaba ukuphuma. Futhi izikhulu zinethemba lokuthi lokho kusho ukuhweba nokuzijabulisa okuqhubekayo ezindaweni eziningi eziseduze naseNyakatho Utica. UMqondisi weState Canal Corp uCarmella Mantello umemezele ngoLwesine ukuqedwa komsele osekuqediwe.
Bekungokokuqala eminyakeni ye-30 ukuthi kusungulwe i-silt kususwe futhi isinyathelo sakamuva kwinqubo ebanzi yokuhlanza i-Harbour Point nokuvuselela kabusha.
Yize abasebenzi beCanal Corp. basebenzise izinyanga ezimbalwa bediliza ichweba nentamo yalo, lokhu kuhlanza okugunyazwe nguhulumeni kwenziwe kakhulu yiGridi kaZwelonke, esebenzisa imali elinganiselwa ku- $ 100 million ukwenza lokho.
"Manje sesisondele ekubeni sigcwalise ngokoqobo umbono wechweba eliphithizelayo, linezinto zomphakathi nezizimele," kusho uMantello, obejoyine ezinye izikhulu zendawo nezikahulumeni engqungqutheleni yabezindaba ngoLwesine ethekwini.
I-Harbour Point yisiza sezinhlelo ezivelelayo zezikhulu zedolobha. Ngaphansi kwemithetho yombuso ephasiswe ku-2008, ingxenye ye-10-acre Inner Harbour yesayithi le-140-acre izodluliselwa kwinhlangano eqhutshwa yedolobha lapho ukuhlanzwa sekuqediwe, isinyathelo okungenzeka sisezophela unyaka nonyaka. kusahanjwe, kusho uMantello.
Okwamanje, abakwa-National Grid, uMnyango Wezokuvikela Imvelo kanye nabasebenza kwiCanal Corp. bazosebenza ukuqeda umsebenzi wokuhlanza.
Uma sekuphelile, inkampani eyenziwe idolobha izofuna abathuthukisi abanamathela embonweni wabo wokuxuba ukusetshenziswa kwezentengiselwano, izindawo zokuhlala nezokungcebeleka esizeni.
"Lapho kukhona khona amanzi, kunezohwebo futhi kukhona nentuthuko yezomnotho," kusho iMeya yedolobha uDavid Roefaro. “Abantu abaningi abazi ukuthi lo msebenzi ubaluleke kangakanani.”
Indawo le yangcoliswa uchungechunge lwamafektri abekwe ngaseceleni kwePort Point. Kuma-1920s, indawo leyo kwakuyindawo eyinkimbinkimbi enkulu ekhiqiza amandla kakhulu eNyakatho Melika, ngokwe-National Grid.
IMeya iveze amaphrojekthi asevele enzeka endaweni ezungezile, kufaka neHoliday Inn Express ehlongozwayo. Abathuthukisi abahlukahlukene futhi bathenga izakhiwo futhi bahlela ukudiliza izakhiwo zakudala zezimboni ukuze zenze intuthuko endaweni ezungezile.
Indawo yokudlela yaseNick Doodles izovulwa e51 N.Genese St., noRoefaro bathi unjiniyela ahlela ukubeka imishini yezitolo lapho i Chen Chen Import Motors ihlala khona kuze kube ivalwa ngonyaka owedlule.
Isithangami sabezindaba sangoLwesine besiphinde sahanjelwa nowesifazane wasePhalamende, uRoAnn Destito, uD-Rome, kanye noSenenkulu wesifundazwe uJoseph Griffo, eR-Rome.
U-Destito ubonge abasebenzi beCanal Corp. abenze lokhu, wathi yonga imali ukuthi ingabi nokuqasha inkampani yangaphandle ukwenza lo msebenzi.
Kucashunwe kusuka kuDredging Namuhla